Kulan ka tirsan horyaalka Somali Premier League oo galabta lagu wado inuu ka dhaco garoonka Eng Yariisow – Gool FM
Haaruun February 19, 2020
(Muqdisho) 19 Feb 2020. Kulan ka tirsan horyaalka Somali Premier League ayaa galabta lagu wadaa inuu ka dhaco garoonka Eng Yariisow Stadium ee dhaca degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir, kaas oo dhaxmari doona kooxaha kala ah Dekedda FC iyo Raadsan.
Ciyaartan ayaa ah mid aad u xiiso badan maadaama ay labadan kooxood diyaargarow xooggan u galeen kulan ciyaareedkan aadka u weyn.
Kooxda difaacanaysa horyaalka Somali Premier League ayaa sanadkan kaliya waxay la kulantay hal guuldarro oo ka soo gaartay naadiga Mogadishu City Club.
Kooxda kubadda cagta Raadsan kulankii ugu dambeeyay waxa ay guul 3-2 ah ka soo gaartay naadiga Mogadishu City Club.
Wiilasha Dekedda ciyaartii ugu dambeysay ay horyaalka ka dheesho waxa ay guul 1-0 ah ugu soo taqlustay naadiga lagu naynaaso jaalasha ee Elman, waxaana goolka guusha u dhaliyay Dekedda Cabdicasiis Catoosh.
Naadiga Raadsan kala sarreynta horyaalka Somali Premier League waxay kaga jirta kaalintaa lixaad iyadoo leh 11-dhibcood.
Kooxda Dekedda waxay fadhisa kaalinta 2-aad ee kala sarreynta horyaalka iyadoo leh 17-dhibcood hoggaanka waxaa looga hayaa farqiga goolasha, Elman ayaana ka haysa.
Kooxaha: Dekedda FC vs Raadsan